Home » Community & Society » မိုးခေါင်အရပ်မှာ မိုးရွာပါစေ ။
Dozen Plus 30th Donation etone ဘ၀ တစိတ် တပိုင်း
ပုဂံတောင်ကျေးရွာ သံလျှင်မြို့နယ် ရန်ကုန်တိုင်း ဒေသကြီး
ဖုန်း -0949346142 / 09250345726/ 0931927098 / 09796356475
နှစ်စဉ် ဆွမ်းဆန်အလှူခံထွက်ပြီး ရတာနဲ့ဖြေရှင်းခဲ့ပေမယ့်
နှစ်စဉ် ဆွမ်းဆန်အလှူခံပြီး ကျောင်းစရိတ်ဖြေရှင်းခဲ့ပေမယ့်
ဒါတောင် သိပ်မိုးခေါင်တဲ့အရပ် မဟုတ်သေးပါဘူး။ မိုးခေါင်အရပ်တွေ အများအပြား ရှိပါသေးတယ်။ မိုးများများ ရွာသွန်းစေဖို့ ဆုတောင်းနေမိပါတယ်….
..အော်… အိုဘယ့် မြန်မာပြည်…
မြန်မာ့အသံတို့..မြဝတီတို့ ရုပ်သံလိုင်းက သတင်းတွေ မြင်ကွင်းတွေထဲမတော့…
မြန်မာနိုင်ငံ၊ မြန်မာပြည်သူတွေဟာ ဒီမိုကရေစီရဲ့ အနှစ်သာရကို စားသုံးနေကြရပြီဆိုပဲ…
ခရီးလမ်းက ကြမ်းပြီး သွားရတာ ဝေးပင်မယ့် တစ်ကယ်လိုအပ်နေတဲ့ နေရာလေးမို့ ဝမ်းသာကျေနပ်မိပါတယ် .
သာဓုခေါ်ပါတယ်…ကြားရတာ မင်္ဂလာပါ… အနော်ကတော့ ဒီတခေါက် သဘာဝရိပ်သာအတွက် အလှူ ခံပြီးလို့ ခဏ နားလိုက်ဦးမယ်… နောက်တခါ သွားလှူမယ်ဆို နည်းနည်း ကြိုပြီး ပို့စ်တင်ထားလေ… ကူနိုင်ရင် ကူပေးမယ်…
ရေမြေသနင်းရေ ဒီလိုဗျကျွန်တော်တို့အဖွဲ့က တစ်လတစ်ကြိမ် လကုန်ပြီး ပထမပတ်မှာ လစဉ်လှူနေတာပါ အစဉ်ပြေတဲ့လမှာ လိုက်လှူလို့ရပါတယ်
ဟုတ်… ရှယ်လိုက်ပါ…ကိုချိုကြီး… လစဉ်တော့ ဟဲ… ကောက်တာဖြစ်ဖြစ်.. လှူ တာဖြစ်ဖြစ်… မလွယ်လှဘူးဗျ… သို့သော် စဉ်းစားလိုက်ဦးမယ်ဗျာ… ကူတာတော့ ကူချင်တယ်…
တစ်ဦးထဲ သွားလှူဖို့ကတော့ ဒီခရီး မနီးဘူး ဖြစ်နေတယ်…။